REPUBLICADAINIK | लिपस्टिक कसरी प्रयोग गर्ने ? - REPUBLICADAINIK
लिपस्टिक कसरी प्रयोग गर्ने ?
काठमाडौं । महिलाहरूले आफूलाई आकर्षक देखाउन लिपस्टिक प्रयोग गर्छन् । लिपस्टिक लगाउनु सामान्य विषय मानिन्छ । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर ध्यान दिनुपर्छ । ध्यान नदिँदा समस्या वा साइड इफेक्ट पनि हुन सक्छ ।
छालाको रङ न्युट्रल भएको अवस्थामा गहिरो गुलाबी या बैजनी रङको लिपस्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ । छालामा सधैँ म्याट लिपस्टिक लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
गहुँगोरो रङको छाला छ भने सेयर ग्लास या मरुन रङको लिपस्टिक लगाउन सकिन्छ । आँखामा स्मोकी लुक्स भएको मेकअप गर्नुपर्छ । न्युड लिप्सले पनि महिलाको लुक्स एक्स्ट्रा देखाउँछ ।
Published : Wednesday, 2018 August 22, 6:52 pm